အိန္ဒြာ: ဘလော့နှစ်နှစ်ပြည့် ရသစာအုပ်စင်နဲ့ နိုဝင်ဘာအပျော်အရွှင်တွေ
ဝတ္တုလေးလည်း ဆရာမမေငြိမ်းရဲ့ ရသစာအုပ်စင်မှာ သွားနားထောင်ပြီးပါပြီ ။
နှစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ အထူး ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ရှေ့ဆက်နှစ်များစွာ ပျော်ပျော်ပါးပါး ဆက်သွားကြပါစို့လို့။
အစ်မ ကျန်းမာပျော်ရွှင် ဘလောဂ့်ဂင်းနိုင်ပါစေ ။
မကြာခဏလည်း အွန်လိုင်းမှာ ရဲဖမ်းခံရပါစေ :)))
၂နှစ်သား ဘလော့လေးမှသည်.. သက်ရှည်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာ ရှေ့ခရီးများစွာ ဆက်နိုင်ပါစေ...
မရေ... ဘလော့ဂ်နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ဖွဲ့ဆိုရေးသား အမှတ်တရတွေ ချန်ထားနိုင်ပါစေနော်။
ကွန်မင့်ချနေတုန်း ပိုစ့်ပျောက်သွားလို့ :)))
အသံဖိုင်လေးကိုလဲဖေ့ဘွတ်မှာ share ထားတယ်..။။
နှစ်နှစ်ထိ အကောင်းအဆိုးတွေကို ကြံ့ကြံ့ခံ ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ နောက်ထပ် နှစ်တွေကိုလည်း အကောင်းဆုံး ကျော်ဖြတ်နိင်ပါစေဗျာ။
၂နှစ် ပြည့်သည်မှစ၍ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ဪ အစ်မ ဘလောဂ့်လေးက ခုမှ၂နှစ်ပြည့်တာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်တို့လို စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဘလောဂ့်ဆိုတာ
လိုအပ်နေတာပါပဲ။ အစ်မရဲ့ ကဗျာ၊ စာတွေကို ရေးချတိုင်းလည်း
စာအုပ်မှာ ရှာဝယ်ဖတ်ဖို့ ဆိုတာ အဆင်မှ မပြေတာ။
ဘလောဂ့်လေး ရှိနေတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့။
အစ်မရဲ့ စာရေးသက်နဲ့အတူ ဘလောဂ့်လေးရဲ့ အသက်ကိုလည်း
Congratz on 2nd blog-anniversary!
အစ်မရေ နိုဝင်ဘာ မှာ နှစ်နစ်ပြည့်သတဲ့လား။
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် အခက်အခဲတွေ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေ အောင်မြင် ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ
စကားမစပ် အနော်လဲ နိုဝင်ဘာမှာ မွေးတဲ့ကောင်ဗျ
မမ နှစ်နှစ်မှစ ရာသက်ပန်
အမြဲလှတဲ့စာတွေအတွက် ချီးကျူးပျော်ရွှင်း)
ဝါသနာအရ ရင်ထဲကလာတဲ့ ပိုးကြောင့် စာတွေရေး၊ ကဗျာတွေရေးနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်က ကျွန်တော့် မကြီး အိန္ဒြာရဲ့ ဘလောက်လေးတောင် ၂ နှစ်ပြည့်သွားပြီနော် ... ဂုဏ်ယူဝမ်းသာပါတယ်မကြီးရေ ... ၂ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်မှသည် နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင် ရေးဖွဲ့၊ ဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်ဗျာ ... ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်တည်တံ့ အောင်မြင်နိုင်ပါစေ..။
အင်အားတွေ အပြည့်ပါတဲ့ ပြင်းရှရှ ကဗျာတွေ စာတွေ အများကြီး ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်...
အိန္ဒြာ ဘလော့ဂ်သက် ၂ နှစ် အတွင်းမှာ စာကောင်းလေးတွေလည်း ရေးဖြစ်တယ်။ သုခရိပ်မြုံ လိုမျိုး အကျိုးရှိတာလေးတွေလည်း လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဆက်လည်း ဒီလိုပဲ ဆက်လျှောက်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Long life Eaindra and her art works !!
We cannot change the history.
All we create will reflect our life, and also this nonsense age and so-called miserably joyous time of valuable life of human being.
I found so many air-heads, no-brainers, losers, and some sort of bullsh** in blogosphere and comment section. I wonder what they are trying to do. Is there nothing to do for them except criticizing to someone?
And second thing is that ART is not dedicated to everybody and no one guaranteed all the ART creations will be easily understood. Everyone can say "like" or "dislike" according to own preference. But, no one should say "good" or "bad" to the art work which he/she doesn't really understand or even so far away from the basic understanding of art or lack of EI or possessing extra chromosome or whatever.
I felt some of people have got mental illness to be shouting words as stupid as they can think and familiar in their environment in c-box. It is so much similar to dogs cannot withstand the sound of triangular brass gong. What they can do is justasimple way: keep howling.
In civilized society, rudeness is the crime and is the childish response of the lunatic. We see clearly why we are writing and what our vision is and where our goal is. So, if there is someone who wants to attack another for no reason, should go to psychiatrist to go and check for your mental disorder.
By the way, congratulations for your blog anniversary! I am remembering the time you all are trying to collect the donations for the poor children who are infected HIV.
I would like to putaquote I love most by Ezra Pound,
“Any general statement is likeacheck drawn onabank. Its value depends on what is there to meet it.” (Ezra Pound )
I am sorry for these obviously stupid who believe what he/she writes on the check (or even in c-box)is what he/she will get. There will be no place for fools to talk nonsense in the future as in previous decade. Especially, in the civilized society, there will be no room for bullsh**’s nonsense.
ဘလော့နှစ်နှစ်ပြည့်မှာ စာတွေလာဖတ် ဆုတွေလာတောင်းသွားကြတဲ့ ညီအစ်မ မောင်နှမတွေ အားလုံး ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်...။
ဘလော့ဂ် အနေနဲ့ တောက်လျှောက်ရေးဖြစ်လုပ်ဖြစ်ဖို့က